छक्का पञ्जा २ को कमजोरीबारे भाइरल स्टाटस, वेबसाईट हुँदै युट्युबसम्म (भिडियो सहित) - MazzakoNews
Home / INTERVIEWS / छक्का पञ्जा २ को कमजोरीबारे भाइरल स्टाटस, वेबसाईट हुँदै युट्युबसम्म (भिडियो सहित)
छक्का पञ्जा २ को कमजोरीबारे भाइरल स्टाटस, वेबसाईट हुँदै युट्युबसम्म (भिडियो सहित)
Mazzako News 4th October 2017	INTERVIEWS, PHOTO GALLERY Leaveacomment
‘छक्का पञ्जा २’ फिल्मले निकै राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । नेपाली फिल्म खासै चल्दैनन् भनिरहँदा दिपकराज गिरी र दिपा श्री निरौला टीमले एक पछि अर्को सुपरहिट फिल्म बनाईरहेका छन् । चौथो फिल्म आईपुग्दा दर्शकले उत्तिकै माया पनि गरिरहेका छन् । ‘६ एकान ६’, ‘वडा नम्वर ६’ पछि ‘छक्का पञ्जा’ बाट भने निकै विवाद र प्रकरणहरु आईपरे ।
यता, फिल्मले नकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै एजुकेशन कन्सल्ट्यान्टहरुले चर्को विरोध गरेका छन् । पोखराको चर्चित ‘किंग्स इन्स्टिच्युट’ का सञ्चालक महेश भण्डारीले फिल्म हेरेपछि लेखेको स्टाटस अहिले भाइरल भएको छ । जुन स्टाटस दिपकराज गिरीको टाउको दुखाई बनेको छ । विभिन्न वेब, ब्लगदेखि युट्युबसम्म पुगेको छ । यसअघि, मज्जाको न्युजकै सामाग्री भिडियोमा हेर्नुहोस्
यस्तो छ स्टाटस ।
‘छक्का पञ्जा’ र यसको टिम यस्तो ब्रान्ड हो जो ‘जे बेचे पनि बिक्छ’ भन्ने मान्यताबाट दिगभ्रमित छ । विश्वास लाग्दैन भने ‘छक्का पञ्जा- २’ हेर्नुस् ।
छक्का पञ्जा गरेर पैसा कमाउनका लागि बनाईएको झूर फिल्म हो- छक्का पञ्जा- २ । कथामा कुनै तयारी छैन । विषयवस्तुमाथि कुनै अध्ययन छैन । मिहिनेत पोलेर खाइएको छ । रथरुपी फिल्मका नट र पेचहरु हल्लिँदै र फुस्कँदै जान्छन् । ठाउँ कुठाउँमा रथ पल्टे पछि, पात्र लडेपछि हाँसो नलागे अरु के लाग्छ ? एउटा शैक्षिक परामर्श दाताको भूमिकामा माग्ने बूढालाई उभ्याइएको छ ।
प्रिय दीपक र दीपाजी, शैक्षिक परामर्श दाताको सँगत गर्नुस् एक पटक । उनीहरुलाई नजिकबाट नियाल्नुस् । उनीहरू जोकर होइनन् । उनीहरू करिअर काउन्सलर हुन् । उनीहरूलाई भेट्न विद्धार्थी अभिभावकको लाइन लाग्छ । उनीहरू विद्धार्थीलाई भेट्न कतै दौडी रहनु पर्दैन । शैक्षिक परामर्श दाताको काम सल्लाह दिने हो । एउटा विद्यार्थीको लागि विवाह गराउन पुरेत खोज्न आँफै घाटमा धाउने र गाविसमा घुस खुवाउन आँफै वडा कार्यालय पुग्ने त्यस्तो कुन परामर्श दाता देख्नु भयो यहाँले ? अध्ययन नै नगरी, रिसर्च नै नगरी थाहा नपाएको विषयमाथि फिल्म नै बनाई दिने ! हावा कथा बुनेर कुनै पनि पेशालाई तुच्छ र पेशाकर्मीलाई पंगु बनाउने यो कस्तो तरिका हो ?
अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने बहानामा नक्कली बिहे गर्न खोज्ने जोडीको कथालाई समेट्न खोजिएको छ । अष्ट्रेलियाको भिसा प्याकेटमा आउँदैन । कुरियरबाट आएको प्याकेटबाट पासपोर्ट झिकेर भिसाको थाहा दिइँदैन । यो कुरा फिल्म मेकरलाई थाहा नभएको प्रष्ट देखिन्छ । कति हाँस्नु ? फिल्ममा कन्सल्टेन्सीको मान्छे पासपोर्टको पेज पल्टाउँदै गर्छ, नायिका राम् राम् भनेर फिंगर क्रस गरेर बसेकि हुन्छे । अष्ट्रेलियाको भिसा अप्लाई अनलाईनबाट हुने सिस्टम सुरु भएको वषौँ भयो । भिसा भए/नभएको इ-मेलमार्फत जानकारी आउँछ । पासपोर्टमा कुनै छापसमेत लगाइँदैन । तर जे हुँदै हुँदैन त्यही भएको देखाइएको छ । प्रक्रिया र पद्दतीको सामान्य ज्ञान पनि लिन चुकेको छ । मुख्य कथावस्तुको महत्वपूर्ण दृश्य/संवाद नै हावादारी छ । अब सोच्नुस् फिल्म कस्तो होला?
कागजी विवाह कागजकै लागि हो, वास्तविक होइन भनेर वकिल पात्र प्रियंकाले गरेको वकालत सबैभन्दा कमजोर छ । अदालतमा गरिने विवाह अदालतको लागि मात्र मात्र हुन्न, सामाजिक विवाह समाजको लागि हुँदैन, चर्चमा गरिने विवाह चर्चको लागि मात्र हुन्न । विवाह विवाह नै हो । अझ कागजमै विवाह भएको प्रमाण पेश भई सकेपछि अदालतले यसको निर्णय एउटै बहसमा टुंग्याउँछ, फिल्ममा जस्तो पटक पटक तारेख थप्दै जाँदैन । तर फिल्ममा बतासे बयान र काइते निर्णय पटक पटक गरेको देखाइएको छ । अझ दर्शकको कन्परो त्यो बेला तात्छ जब न्यायधिशले त्यो केसको जिम्मा प्रहरीलाई लगाउँछ । दीपकजी, तँपाई आँफू हिरो बन्नको लागि कथालाई जता पनि मोडिदिने ? विवाहजस्तो पवित्र कार्यलाई चुरोटको खिल्ली बनाएर सल्काईएको, अदालतजस्तो संस्था र न्यायधिशजस्तो पेशालाई समेत खरानी बनाएर उडाइएको छ ।
मुख्य कथावस्तुमै चुकेको यो फिल्मको अन्य सहायक कथाका त्रुटीको त कुरै नगरौँ । नसुहाउँदो पात्र, अमिल्दो कथा र उरन्ठ्याउलो अभिनयले फिल्म पिँडालुको पेँडा बनेको छ । फिल्म फिल्म जस्तै हुनु पर्छ । यो टेलिसिरियलभन्दा माथि र कमेडी शोभन्दा फरक हुनु पर्छ । शैक्षिक परामर्श दातालाई खिल्ली उडाउन कस्सिएका दीपक/दीपाको टीमले सायद चिट चोरेर एसएलसी पास गरेको मान्छेलाई कथा लेख्न लगायो, मेट्रीकमा डबल फेल भएको मान्छेलाई क्यारेक्टर सेलेक्सन गर्न लगायो । निर्देशकको नाममात्रै छ, काम केही देखिँदैन । निर्देशक भन्ने कुनै मान्छे अलिकतीमात्रै एक्टिभ थियो भने फिल्म यस्तो विद्रुप बन्थेन । फिल्मको अर्को नाम हजमोला होइन । दर्शकले जे आउँछ, त्यो पचाउँदैन ।
'छक्का पञ्जा' र यसको टिम यस्तो ब्रान्ड हो जो 'जे बेचे पनि बिक्छ' भन्ने मान्यताबाट दिगभ्रमित छ । विश्वास लाग्दैन भने 'छक्…
Opslået af Mahesh Bhandari på 29. september 2017
Previous नातिको जन्मदर्ता गराउन प्रचण्डको आनाकानी, प्रकाशकी पत्नी सिर्जनालाई छोरा पढाउन धौ धौ
Next विश्वकै अनौठो आलु, जसलाइ खाँदाखेरी मानिस सँधै जवान !